EPL: Man City oo guul ka gaaray Swansea City, walina ku dheggan hoggaanka horyaalka, xilli ay iska sii wadato guulaheeda xiriirka ah… + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Man City oo guul ka gaaray Swansea City, walina ku dheggan hoggaanka horyaalka, xilli ay iska sii wadato guulaheeda xiriirka ah… + SAWIRRO
(Swansea) 24 Sebt 2016 – Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa iska sii wadata guulaheeda xiriirka ah ee horyaalka Premier League, waxaana ay markaan 3-1 uga adkaadeen naadiga Swansea City oo ay marti u ahaayeen, iyagoo hoggaanka laga loodin la’yahay wali.
Man City ayaa goolka la horreysay waxaana 9’daqiiqo u daah rogay Sergio Aguero, kaasoo maanta kooxda dib ugu soo laabtay kaddib saddex kulan oo uu ganaax kaga maqnaa.
Kooxda Swansea City ayaa iska diiday sheekadaas waxaana goolka Aguero saddex daqiiqo kaddib u soo barbareeyey Swansea City weeraryahankooda Fernando Llorente, sidaas ayaana lagu kala nastay barbaro 1-1.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Man City ayaa lagu abaal-mariyey rigoore, kaddib markii uu Mike van der Hoorn wajiga gacan kaga dhuftay Kevin de Bruyne oo ku jira xerada ganaaxa waxaana gool ku laadkaas gool u bedelay Sergio Aguero, kaasoo kulanka ka dhigay 2-1 ay ku gacan sarreeyeen Man City.
Raheem Sterling ayaa hoggaanka u adkeeyey kooxdiisa Man City kaddib markii uu Swansea City ugu shubay goolka saddexaad 77’daqiiqo, markii uu caga-wareejis ku dhaafay mid ka mid ah daafacyada Swansea, isla markaana dhinac ka dhigay goolhayaha, kulanka ayaa ku soo dhammaaday 3-1 oo ay ku adkaatay kooxda tababare Pep Guardiola.
Man City ayaa guulo wada gaartay lixdii kulan oo ay ciyaartay horyaalka Premier League, isla markaana dhinaceeda dhulka la dhigi la’yahay wali, waxaana ay sidaas ku fadhisaa halka ugu sarreysa horyaalka Ingiriiska, iyadoo leh 18 dhibcood, kooxda Tottenham Hotspur oo ku soo xigta kuna jirta kaalinta labaad ee horyaalka ayaana leh 14-dhibcood.
Gary Neville oo soo dhaweeyay in keyd lagaliyo Wayne Rooney
EPL: Kooxda Liverpool oo guul wayn ka gaartay 10 xiddig oo Hull City ah iyo kulammadii kale ee la ciyaaray horyaalka Premier League… + Sawirro
“Waan la dhacsanaa Bandhiga ciyaartoydeeda, laakiin waan ka Niyadjabay markii ay la yimaadeen Sheekada Manchester U… https://t.co/cnfe5EKMdi